Home Wararka Gudaha Siyaasadda Soomaaliya: Waa kuma Xamsa Cabdi, ninka ay hadal-hayntiisu qabsatay baraha bulshada?
Siyaasadda Soomaaliya: Waa kuma Xamsa Cabdi, ninka ay hadal-hayntiisu qabsatay baraha bulshada?
Tan iyo maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada si wayn loogu hadal-hayay Xamsa Cabdi Barre oo dad badan ay la xiriirinayeen jagada raysul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Arrintan ayaa kusoo aadday xilli Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii la soo dhaafay laga dhowrayay inuu ku dhawaaqo raysul wasaaraha soo dhisi doona xukuumadda.
Wali ma jiro war kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha oo lagu magacaabay Wasiirka Koowaad, sidoo kalena lama helin wax xog ah oo sheegeysa in Xamsa uu noqonayo qofka loo xulanayo kursigaas.
Waa kuma Xamsa Cabdi?
Bishii la soo dhaafay ee May 15-keedii ayay ahayd markii doorashadii madaxweynaha ee ka dhacday Muqdisho uu ku guulaystay madaxweynaha cusub, isagoo laga dhowrayay in muddo 30 maalin gudahood ah uu magacaabo raysul wasaaraha, si baarlamaanka loo hor geeyo.
Madaxweyneyaasha Soomaaliya ayaa looga bartay in ay lasoo daahaan soo bandhigidda magaca raysul wasaaraha, iyadoo mararka qaar xitaa sababta muran ku aaddan in la dhaafay waqtigii sharciga ahaa.
Markii ugu dambaysay ee mowduuc noocan ah uu hadal-haynta dhaliyay waxay ahayd sanadkii 2020-kii.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muddo ka badan bil ay ku qaadatay soo xulashada raysul wasaarihii beddaelay Xasan Cali Kheyre oo ay baarlamaanka kalsoonida kala noqdeen.
Ma jirto muddo cayiman oo dastuurka kumeel-gaarka ah ku qoran, oo ay tahay in madaxweynaha uu kusoo magacaabo raysul wasaare, balse dhaqanka siyaasadeed ee soo-jireenka ah waxa uu ahaa in madaxweynaha uu muddo bil gudaheed ah ku magacaabo madaxa xukuumadda.
Ma jirto caqabad muuqata oo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hor taagan, isagoo madaxweynihii hore uga duwan khilaafkii hareynayay xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowlad-goboleedyada.
Raysul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadda ah raysul wasaaraha xil-gaarsiinta ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleMaxaa iska badalay Qorshihii Magacaabista Reysul Wasaaraha Soomaaliya.
Next articleXog: Diyaarad ka kacday Muqdisho oo loo diiday inay ka degto gobolka Gedo
Mid kamida Ganacsatada Somalida Cape Town Caan ka ka ahaa ayaa...